Kwemavambo mavambo e Reflexology - AFRIKHEPRI
EMPIRE YAGHANA: IYO WAGADU
Relaxation uye tsoka kutsikisa
DYakavakwa kubva kumadzitateguru maitiro enzira dzekugadzirisa muviri uye kugara zvakanaka, Reflexology yakaverengerwa muzana rino ramakore re20. Izvo zvinosanganisira kushandisa chokwadi chekuti chese chinosimudzira chinoteverwa nemhinduro ye organic. Nekumanikidza kune dzimwe nzvimbo kana nzvimbo dze Reflex dzechiso, muviri wese, tsoka, isu tinobvisa simba blockages, kudzoreredza marwadzo nekusimudzira simba rakakwana musimba mumuviri wese. Nekudzoreredza simba rinoyerera YIN uye YANG inoraramisa munhu, iyo nhengo inogona kuwana yakanaka kushanda.
Reflexology ndeyekusagadzikana kwechiremba chirongwa, kushaya massage. Inogona kunge yakasima, zviso, inricular, palmar or in integral.
MaInca, mugariro wekare kwazvo muPeru, unowanikwa makore anopfuura gumi nemana, vanonzi vakaendesa rudzi urwu rwekurapa kumaIndia ekuAmerica ekuAmerica, vachiri kuzvibata nanhasi. Tsitsi massage inoonekwa setsvene.
Izvo zvakaratidzirwa kuti mamwe marudzi epakutanga muAfrica zvakare ane ruzivo rwakareba munzvimbo ino. MuIndia, mahwendefa akare kwazvo akanyorwa akawanikwa achiratidza kuenderana pakati petsoka dzemakumbo uye nhengo dzemukati.
Reflexology yaivapo anopfuura makore mazana mana nemazana mashanu apfuura muEjipitori zvichiratidzwa nekutsveta kwakawanikwa muSaqqara mune guva reGibhithe revanachiremba. Kuwanikwa kwe mural fresco yekutanga kubva 4 kusvika 500 BCE inomiririra vanhu vana, kusanganisira vaviri varapi vanopa massage kune yeumwe wevamwe vanhu vaviri. Rumwe ruoko rwemurwere rwunoratidza kune anorapa nzvimbo inorwadza kuti ishandiswe. Zviratidzo pamusoro peiyi nhanho zvakatemerwa kuLondon Museum. "Ndokumbirawo usandikuvadza," akadaro murwere. "Ndichaita zvese zvandinogona kuti ndikubatsire," anodaro murapi. Ichi chiitiko chinomiririra zvakakodzera kushandiswa kweiyo Reflexology.
Kubatanidza Reflexology kwakaitwa muTibet uye mune mamwe matunhu eEast, zviuru zvemakore zvakapfuura. MuChina, chiremba Wang-Wei, chiremba kubva muzana remakore rechina BC, akashandisa acupuncture uye Reflexotherapy pamwechete. Kumadokero, rimwe rekutanga kushandira pane iro rakabudiswa muna 4 nevarapi vaviri vekuEurope, vane mukurumbira munguva yavo, vanachiremba Adamus naAtatis.
Maitiro ekure reflexology inoshanda sei
Yekunyepedzera nzeve ndeyekunyepedzera kwezeve. Iyo hunyanzvi iyo iri mukushandisa iyo pina yehura kune zvinangwa zvekurapa nekusimudzira mapoinzi kana nzvimbo dzinoratidzira.
Atrial reflexology inokwereta manzwi anoratidza, ndiko kuti kukurudzira kweiyo nhanho inoita, nezwi rekunyepedzera, kuburikidza neiyo tsinga system, pane inoenderana nhengo. Iwe unofanirwa kuziva, kuti iyo auriculo-Reflexology mapepa anongoonekwa chete kana nhengo dzinoenderana dzichitambura.
Uchishandisa topography yezeve, naturopath inotsvaga nzvimbo dzinorwadza kuti dzikurudzire (zvinhu zvinoshandiswa: simbi stylus).
Atrial reflexology inopa dzakananga protocols kurwisa marwadzo (matambudziko rheumatic, chenjera anogumbura zviitiko), muropa (kusvuta, kofi ...) uye mupfungwa (huta uye zvinetso zvepfungwa).
Kutanga kwe reflexology inrial
Kwakatangira nzira iyi ndeyakare kwazvo. Zvinoratidzika kunge zvaiitwa muAntiquity, kunyanya muIndia, China neEgypt; yakanga iri nzira yakajairika yekurapa muMediterranean basin mazana mana emakore BC .. VaIjipita vakanyaradza kurwadziwa nekumutsa izvo zvakananga zvaive munzeve. MaChinese aizivawo tsika iyi. Hippocrates yakanyatsobudirira kurwisa dzimwe mhando dzekusakendenga nekushomeka kweropa panzvimbo yezeve.
Sekureva kweChinese dzidziso yekurapa, nzeve yega yega ine zvinopfuura zana nemakumi manomwe ezviyo zvekubatanidza izvo zvinobatanidzwa nezvikamu zvakasiyana zvemuviri. Iko kuongororwa mune auriculopuncture kunoenderana nekusimba kwesimba uye pane yemuno mamiriro ezvinhu munzeve kurapwa kunovavarira kukurudzira mamwe emapoinzi makumi maviri nemaviri.
Mhemberero dze nasal reflexology
Kana kufananidzira kwemhino yeTibetan chiratidzo cheunhu uye nzira yekuita yega yega, yakakosha zvikuru muEgypt yekare. Nguva refu pamberi paCleopatra Julius Caesar akati yakanga ine mhete inofadza, yakakurudzirwa, panguva yakareba kwazvo kukudza mhino yemunhu kana munhu aida kuchengetedza utano hwake ".
Mhedzisiro ye endonasal reflexology iri kure kwazvo. Anoberekerwa muChinese neEgypt. Hippocrates (yezana remakore rechi5 BC) akashandisa iyo kukuvadza kuderedza kushorwa uye nokudaro kugadzirisa mamwe marudzi ezvinetso zvakadai sechirwere chinonzi diaphragmatic spasm.
Yakanga isiri kusvika pakuguma kwezana remakore rechi19 kuona kuti tsika iyi inokura nesayenzi.
Pierre Bonnier (1861-1918) anobudisa mapepa akawanda panyaya iyi.
Mumakore e30, Paul Gillet anonyora maitiro ake pamushonga unonzwira tsitsi. Iyi nzira iri kuwedzera muSpain neGermany.
Mumakore e80, Bonneton, Bontemps, Ricard, kuparidzira mabasa akawanda anofadza.
Ichakurumidza kuwanikwa, bhuku rinotapudza rakapetwa rakanyorwa naDaniel Bobin: "The sympathicotherapy exactly".
Nhungamiro yeanal reflexology
In kuwanda dzepanguva kwakajairika, idzo Parizvino mapoka kwechokwadi anoita kuti sympathicotherapy anopindura nzvimbo akakurumbira sezvinoitwa jekiseni mushure zvetsika Chinese mishonga Auriculotherapy, siyana reflexology podal, ari kuora mwoyo, nezvimwewo.
Icho chaiwo che reflexotherapy ndechokuita arc reflex, iyo, kubva chero ipi zvayo yemuviri, iyo ichaita pane imwe nzvimbo, kunyange nhengo, uye kunyange basa, kutonga, kuparadzira kana kubudisa.
Izvo zviri mumamiriro ezvinhu aya kuti somatotopies yakasikwa, mapepa echokwadi ehutu kana nzvimbo dzine chiito pane zvikamu zvakasiyana zvehupenyu. Nokudaro, pane seatotopies atrial, plantar, ocular, nasal, mimba, meridians, ndinopfuura vazhinji.
La nasal reflexology ou sympathicotherapy inzira inoshandisa reflex point, panguva ino iri mucous membrane yemhino fossae, iyo yakarongedzwa nemitsipa yakawanda magumo eiyo hurongwa hwekunzwira tsitsi, achiibatanidza kune nhengo dzakasiyana. Mukunzwira tsitsi, kukurudzira kunoitwa nekubata pamitsara mitatu yemhino imwe neimwe uchishandisa masitayiti, akaomesesa, kana ane hafu, ane matipi anotenderedzwa uye zvakanyanya, achishandisa machira akaiswa pamba. mafuta anokosha.
Kunzwira tsitsi kunobata pane rimwe rechitatu rebazi rekutenderera kwemaitiro nekutungamirira neuro-vegetative (orthosympathetic uye parasympathetic) system nemigumisiro yakareba yakanyanya. Kukurudzirwa kwemamwe mativi kana nzvimbo dzemhino kunogonesa kubata zvirwere zvakasiyana-siyana zvinoshanda. Kushandiswa kwemafuta anokosha kunosimbisa nzira nenzira imwe.
Mhedzisiro yacho inokatyamadza nekuti inobvumira nzira yakapusa uye pamusoro pese inokurumidza iyo inovavarira kukurudzira mamwe mativi endonasal reflexogenic zones kuitira kuenzanisa uye kugadzirisa ayo anonzwira tsitsi uye parasympathetic saka iyo neurovegetative system.
Pasina kunoitwa pane kutsikisa tsoka, kufema ruoko kune zvimwe zvakunobatsira nekuti yakapusa: inoitwa nekukurumidza uye mumamiriro ese ezvinhu.
Iko kukurudzira kwesimba mapoinzi kunoitwa nekumanikidza, kutenderera kwemassage-massage kana mutsara wediki-massage. Palmar Reflexology inogona kuve yakafanana nekudzvanya maoko, asi inoramba yakasiyana kwazvo pakuiswa kwenzvimbo dzinonamira.
Kunge tsoka, maoko igirazi yemuviri wedu. Iyo reflexogenic zoni inowanikwa muchanza, paminwe uye kumusoro kwemaoko maviri. Inogara ichidanwa pamusoro, maoko anowanzove asina kudzika pane tsoka kune iro basa reiyo Reflexologist, asi zvakadaro bvumira basa rinonakidza, rinowedzeredza kune izvo zvinoitwa mune inoenderana nestarology, chiito chayo icho chinosimbisa.
Palm Reflexology ndiye munin'ina wePlatinar Reflexology. Sezvakangoita tsoka, maoko ane nerve endings rakabatanidzwa kune yedu muviri wese. Chinhu chinosekesa nacho ndechekuti "chiri pamunwe". Palmar reflexology inogona kuitwa chero nguva, sekudzoreredza musoro.
Nepo tsoka dzine zvigadzirwa zvinotarisa pane neurovegetative system (iyo isingazivi), iwo maoko akatarisana necortex uye saka pane anoziva.
Maoko emaoko ane zviuru zvine zviuru zvekunzwa sensve endings, izvo zvinodziisa pakati penzvimbo dzinonyanya kubata muviri. Massage inogona kushandiswa kukurudzira kana kudzikisa muviri wese. Ruoko rwemaoko runobudirira kusunungura kupera simba kwezuva refu. Inogona kuzorodza, kumutsiridza kana kudzikamisa Iyo inowanikwa kwazvo, yakapusa massage uye haizotore nguva yakawanda kuratidza kuti inoshanda: Kwemaminitsi gumi kusvika gumi nemashanu ekurwiswa kwakaringana kuraramisa kugona kwakanaka kweusiku uye kuzorora, uye kune vakawanda haina dambudziko kuverengera.
Kunobvisa kusawirirana, kunoderedza kushungurudzika, kudzorera simba uye inzwi, zvakare-simba rinobatanidza mabasa anokosha emuviri.
Nemhaka kuchirapa kukanganiswa ari dzepanguva nzvimbo vabatwe nezvirwere zvose panhu: asima, nezvimwe zvinhu, bronchitis, Sciatica, tinnitus, kupatira, kushaya hope, marwadzo, kufunganya, etc.
Kubva kwePlantar Reflexology
Pano Reflexology ndeyendo rutsoka rukuru hwemisi inoshandiswa pamutemo we meridians dzomukati anoshandiswa mumishonga echiChina kwemakore anopfuura 5000. Chimiro chekare kudarika sangano re reflexology nderepyyyori yekare yeEgipita apo tinoona varume vachidzikisa tsoka dzavo. Mishonga yemuIndia inoshandiswa uye mumiririro etsoka dzaBuddha inoratidza basa rinokosha remiti yemiti mukutarisa kusagadzikana kwezvinhu uye nzira dzokubata nadzo.
Maitiro emutauro weChina anoona kuti muviri unofamba 12 meridians inobatanidza nhengo huru apo kubuda kwesimba kunopera kunoita kuti hutano huve hwakanaka. Mumwe anogona kupindira pakuparadzirwa kweizvi simba guru kuburikidza nekupindira pamwero wezvakataurwa zvakadanwa zvinonzi reflex points izvo zvakakosha kudzikisa, kushandisa, kudzvinyirira, kunyorera kuitira kuti kugadzirisa zviyero zvezvikamu.
Zviri pamakumbo edu kuti tiri kunangana zvakananga naamai vedu Pasi.
"Iko kune tsoka dzako, rwendo runotanga" Lao-Tseu, muna Tao-Te King
Apo patinenge tichiita reflex nzvimbo yekusimudza, tinoshanda maererano neshoko rekufamba: tinoisa chimwe chinhu tichifamba.
MuChina, Dr. Wang-Wei, chiremba wezana remakore regumi nemapfumbamwe BC, akashandisa acupuncture uye reflexotherapy pamwechete.
Kune veChinese, rutsoka chikamu chemweya chemuviri
Inymology yezwi rokuti "rutsoka" muchiChinese rinoreva "chikamu chemuviri unochengetedza hutano".
Kune veChinese, rutsoka chikamu chemweya chemuviri. Kubata tsoka kunobata mweya wemunhu. Ichowo chikamu chemuviri unochengetedza ushamwari zvachose nevhu, pasi, pasi rose. Netsoka, muviri unodzosera mu telluric energy. Pane kuwirirana pakati pezvikamu zvose sezvo pane kuwirirana pakati penyama neyepfungwa, muviri uye Nyika. Zvose zvirongwa zvepanyama uye nhengo dzomuviri wedu zvinomiririrwa. Semuenzaniso: hurongwa hwekufamba-shanduka, chirwere chekudya, musana, nezvimwewo.
Plantar Reflexology muWest
Chikamu chimwe nechimwe chetsoka chakabatana, kuburikidza nehurongwa hwemitsipa, pamwe nhengo dzomuviri, maererano nenzvimbo chaiyo yekusika, kuitira kuti kukurudzirwa kwechirevo chetsoka chisinganzwisisiki kunokonzera kukurudzira kwechirongwa chakafanana .
Kumadokero, rimwe rekutanga kushandira pane iro rakabudiswa muna 1582 nevarapi vaviri vekuEurope, vane mukurumbira munguva yavo, Dr Adamus naAtatis.
Mazuva ano reflexology yakadzokera shure kubasa rechiremba weAmerica, Dr. William Fitzgerald, uyo akazivikanwa sababa vekugadzira kwemazuva ano reflexology.
Ikozvino mafungiro evhangeri akavakwa naEunice Ingham Stopfel ane mabhuku maviri "Zvingaitwa nemakumbo" uye "Zvakataurwa nemakumbo" zvakashanda sechikonzero chekufungidzira. Ndiye iye akatsigira kuisirwa kwemakumbo etsoka uye akabatanidza nzvimbo dzakakwana nemhando imwe neimwe.
"Kushushikana kwemaoko kunoita kuti masosi ehupenyu ayerere" Takujiro Nanikoshi
Apo patinenge tichiita reflex nzvimbo yekusimudza, tinoshanda maererano neshoko rekufamba: tinoisa chimwe chinhu tichifamba. Kutarisa kwezvinhu izvi kunogona kupa ruzivo pamusoro pemamiriro emumuviri kana kuti hutachiona nenzvimbo dzakaoma, marwadzo kana kuonekwa zvakananga kumubata.
Chinangwa chekufungidzira ndezvekudzorera simba uye kuenzanisa kwemuviri wose.
Inoshandiswa kuunza kuzorora kwemuviri wose uye kunounza kuruvara nekuzorora uye kuderedza kushushikana. Muitiro unofara unopa, nekuda kwekubata uku kwetsoka, unokonzera kushungurudzika kwehutano hwekukakavadzana, kudzvinyirira kana kusagadzikana. Nokuzorodza muviri, inodzivirira matambudziko anobva kune zvese zvekutya kana kufunganya.
Reflexology inogona kupindira zvakanaka kuburikidza nehutachiona hunojekesa kusawirirana kwemukati zvakadai se migraines, kusuruvara, kurwadziwa shure, arthritis, chronic sinusitis, nguva dzinorwadza, kuputika uye kunzwa kunetseka mumakumbo.
Pano reflexology imwe yemigadziro yekuchengetedza hutano hwakanaka, kunonoka, kunyaradzwa nekugara zvakanaka. Iyo nzira inobatsira yekurwisana mupfungwa. Inobatsira kusimbisa pfungwa dzisina simba dzomuviri uye kusunungura simba rinopfuura.
Inobatsira kugadzirisa muviri wose, muviri uye pfungwa. Plantar reflexology ine simba rinobatsira pakupararira kweropa, kunonoka kwematambudziko, kuvandudzwa kwehope ...
Icho chiito cheutano chinogona kushandiswa zvakachengeteka. Pasina chero njodzi, inobvumira kuita zvakanakira kuchengetedza hutano.
Kana iyo isingagadzirise matambudziko ose, iyo inobatsira zvikuru kune vose, vakuru uye vaduku.
Kune imwezve nzira yekufamba kwechitendero reflexology ne chakras
Iyo etheric muviri inosanganisira manomwe makuru chakras (mudzi, hutsvene, solar chakra, moyo, huro, rechitatu ziso, korona). Zviri izvi izvi kuti isu tishande panguva yekura massage. Ose ane matombo, mavara, maoiri akakosha uye nhengo dzakabatana. Yese chakras inobatwa panguva yekuswedza nekuti kana imwe yadzo isineiwo nevamwe inogona kukanganisika.
Bhaibheri rangu re Reflexology uye acupressure nemafuta akakosha
5 nyowani kubva ku € 24,00
5 yakashandiswa kubva € 19,75
Tenga 24,00 €
kubvira waChikunguru 4, 2020 8:25 am
Chirwere cheAlzheimer muhupenyu hwezuva nezuva
NDETE YALLA, QUEEN YOKUTANGA WEWALO (Senegal)
Nanny Sur Masayendisiti anoona kuti kutsanya kunokonzera kushandiswa kwemaini: "Masayendisiti ari kuuwana izvozvi !? Islam yakaziva izvi for 14 century 😅" Jul 4, 08:49
tindee511 Sur Masayendisiti anoona kuti kutsanya kunokonzera kushandiswa kwemaini: "Kunyangwe dzimwe mhuka dzinokurumidza kana dzichirwara" Jul 3, 18:17
tindee511 Sur Masayendisiti anoona kuti kutsanya kunokonzera kushandiswa kwemaini: "Kutsanya kunoiswa mune zvitatu monotheistic zvitendero" Jul 3, 18:14